2020 Osmangazi Bridge Toll | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 Kocaeli2020 Osmangazi Bridge Toll
02 / 01 / 2020 41 Kocaeli, GUUD, hyperlinks, WADADA, Gobolka Marmara, TURKEY, VIDEO
sanadka osmangazi lacagta arooska
Horraantii sanadihii 2020, Cusmaaniga Cusmaan ayaa helay saamikiisii ​​waxaana lacagta lagu kordhiyey 14 boqolkiiba.
14% Kusoo Kordhinta Buundada Cusmaan Gazi
Heerka socodka socodka 14 boqolkiiba ayaa sidoo kale lagu muujiyey lacagihii lagu soo rogay Buundada Cusmaan Gazi. Gawaarida rakaabka ayaa ka gudbaya Buundada Cusgazi oo u gudubta 103.05 TL ilaa 117.90 TL, lacagtii laga soo qaaday gawaarida ganacsiga ee fudud ayaa ka kordhay 164.85 TL illaa 188.65 TL.
Kulamada lagu sameeyo Buundada Cusmaan Gazi waxaa loo liisgarey 1 Janaayo 2020:
Mashaariicda BOT 2020 Sanad Cusubi Gazi Bridge Toll Sates
QORAALKA GARGAARKA Jadwalka Jiilaalka Cusmaan Gazi Bridge (TL)
Iyada oo kor u kaca ugu dambeeyay ee looga aado Istanbul laga soo bilaabo Bursa wuxuu qaali ahaa 20 TL Horey waxaa loogu xirey buundada Osmangazi laga bilaabo Gebze ilaa Bursa North bixida waxaa sameyay gaariga rakaabka waxaa lasiiyay 136 TL. Hadda khidmaddan ayaa gaartay 156 TL. (Sanduuqa Istanbul iyo khidmada buundada)
Ka tagista Bursa una aado Istanbul waa qaali
Ku saabsan buundada Cusgaani
Buundada Cusgaani ama buundada Izmit Bay Bridge waa buundada afaraad ee ugu dheer muddo dheer laga joojiyay adduunka, oo laga dhisay inta u dhaxaysa Dilovasi Dil Cape iyo Altinova Hersek Cape oo ku taal Gacanka Izmit, oo dhererkeedu yahay 5 mitir iyo dherer dhan 1.550 mitir.
Marka la eego baaxadda Mashruuca Wadooyinka Gebze-Orhangazi-İzmir, waxaa jira 384 kiiloomitir oo jidadka waaweyn iyo 49 kiiloomitir oo isku xirka waddooyinka ay ka mid yihiin Cusubada Gazi Bridge. Adigoo adeegsanaya buundo kaliya, isgoyska gacanka ayaa laga yareynayaa 2 saac ilaa 6 daqiiqo, marka mashruuca oo dhanna la dhameeyo, celcelis ahaan safarka Istanbul-Izmir wuxuu socon doonaa 8 saacadood. Wadada laamiga ah ee cusub ayaa 3,5 kiiloomitir ka gaaban wadada hada gobolka hada jirta waxaana buundada loo isticmaalaa safarka buundada halkii 95 kilomitir ay ku qaadaneyso 1,5 saacadood. Maadaama wadooyinka gobolka ee jira ay ka gudbaan xarumo badan oo magaalada ah, xeerarka xawaaraha wadooyinka lama quseeyo.
Osmangazi Bridge Toll 11 35 la joojiyay oo dollar waxaa loo qaaday
Izmit Bay Bridge Champion-ka Koobka Adduunka